Mothers' Day မှာ အမေ့အတွက် Burmese Dream Gift Set ကံစမ်းလိုက်ပါ! | Codashop Blog MM
Home News Mothers&#8217...
Mothers’ Day မှာ အမေ့အတွက် Burmese Dream Gift Set ကံစမ်းလိုက်ပါ!
မိခင်ဆိုတာ သားသမီးတိုင်းအတွက်တော့ ဟီးရိုးတစ်ယောက်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဂိမ်းတွေထဲက ဟီးရိုးတွေမှာ Ultimate Skill (အာတီ) တွေရှိသလိုပဲ မိခင်တိုင်းမှာလည်း ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ စွမ်းရည်တွေကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။
ဒီအစီအစဥ်ကတော့ ကိုယ်မေမေရဲ့ အတော်ဆုံးစွမ်းရည်တစ်ခုအကြောင်းကို အစီအစဥ်ကြေညာထားသော Facebook Post အောက်က Comment မှာ Sharing လုပ်ရင်း မေမေ့အတွက် Burmese Dream Gift Set ကံထူးနိုင်မယ့်အစီအစဥ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Burmese Dream Gift Set မှာဆိုရင် Australian Pink Clay Mask နဲ့ A Chit Liquid Lipstick (၂)ခုစီ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အစီအစဥ်ကြေညာထားသော Facebook Post အောက်က Comment မှာ ကိုယ့်မေမေရဲ့ အတော်ဆုံးစွမ်းရည်တစ်ခုအကြောင်းကို Sharing လုပ်ပါ။
ဒီအစီအစဥ်ကို ၂၀၂၂၊ မေလ (၈) ရက်နေ့မှ မေလ (၁၄) ရက်နေ့အထိ ပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းနဲ့အညီ ပါဝင်တဲ့သူတွေထဲက (၁၀)ယောက်ကို Codashop Myanmar မှ တာဝန်ရှိသူများက မဲနှိုက်ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Australian Pink Clay Mask နဲ့ A Chit Liquid Lipstick (၂)ခုစီ ပါဝင်တဲ့ Burmese Dream Gift Set တစ်ခုစီ (စုစုပေါင်း ၁၀ ခု) လက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဤအစီအစဥ်မှရရှိမည့် ဆုလက်ဆောင်ကို ငွေသားဖြင့်လဲလှယ်ခြင်း၊ အခြားသူများကို ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း မပြုလုပ်ရ။ Codashop Myanmar မှသိရှိခဲ့လျှင် ဆုလက်ဆောင်ကို ရုတ်သိမ်းခွင့်ရှိသည်။
Previous articleCodashop Global Series April 2022 MLBB Tournament စည်းကမ်းများ
Next articleမေလ Promotion မှာ MLBB နဲ့ အခြားသတ်မှတ်ထားသော ဂိမ်းများအတွက်ဝယ်ယူပြီး အလန်းစားဆုလက်ဆောင်တွေ ကံစမ်းလိုက်ပါ!